Gịnị Bụ The Best Ahụmahụ nwere na Switzerland | Save A Train
Home > Travel Europe > Gịnị Bụ The Best Ahụmahụ nwere na Switzerland
Oge Ọgụgụ: 5 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 06/10/2020)
ah, Switzerland, a mara mma na udo mba nọ ọdụ comfortably Italy, France, na Germany. Ọ bụ ọnụ ahịa a nleta ahụ mere Switzerland na-anọgide gosiri otu n'ime obi ụtọ mba ụwa. Ya mere, ihe i chere nke mgbe ị na-eche 'Switzerland '? M guessing snow kpuchitere ọnụ ọnụ ugwu, cheese, na chocolate. A ga-enwe oge buru chocolate na fondue gị Swiss vacay, ma jide n'aka na-agụnye niile nke omenala, eke, na akụkọ ihe mere nke a pụta ìhè mba nwere na-enye. Site The Epic ụgbọ okporo ígwè agafe na ugwu treks ka agha-idobe ije, Switzerland nwere ihe na-enye ọ bụla ụdị njem n'oge ọ bụla oge. Ka anyị gbarie ụfọdụ nke kwesịrị-dos gị njem Switzerland.
Travel site Train
Train njem bụ ihe ịtụnanya ụzọ ahụ a obere mba. Ịkwụ ụgwọ ụlọ a ụgbọ ala na ụzọ adaghị nwere ike ịbụ a mma n'ụdị nke iga na ọtụtụ mba, ma ejegharị ejegharị ụgbọ okporo ígwè na Switzerland bụ iconic ahụmahụ! The ụgbọ oloko dị ọcha, n'oge, na njem site ụfọdụ ihe ndị kasị breathtaking mma n'ụwa. Ọzọkwa, ụfọdụ nke ụgbọ okporo ígwè ụzọ gasị ka nwere nnọọ nke ọma-echebewo, akụkọ ihe mere eme ụgbọ okporo ígwè ụgbọala ga-eme ka ị na-eche dị ka ị na-na otu agadi nkiri! Ụfọdụ n'ime ihe ndị kasị ama ụzọ gasị agụnye Jungfraujoch, na GoldenPass Line, na glasia Express. Ụfọdụ n'ime ndị a ụzọ gasị na-gụnyere na Eurail Pass, na ụfọdụ ndị na-adịghị ga-enye ego ka Eurail Pass ịgụ. Ụgbọ oloko na Switzerland-bụghị mgbe niile ọnụ ala, otú a obere ụzọ mee atụmatụ nwere ike inyere gị zọpụta ụfọdụ franc, ma ị bụ ejegharị ejegharị cross-mba ma ọ bụ nanị na-ewere a ụbọchị njem!
Basel ruo Tralaken
Bern si Tralaken nye ya
Lucerne na Tralaken
Zurich na Interlaken sitere na Ọzụzụ
The Swiss Alps bụ otu n'ime ndị kasị iconic oyi egwuregwu ebe n'ụwa. Na-eche ụbọchị na mkpọda, ehihie na abalị curled elu na a na-ekpo ọkụ cup tii na a na-ekpo ọkụ efere cheesy ofe. Ọ bụrụ na ị bụ site na a na-ekpo ọkụ ihu igwe na mgbe skied tupu, oyi njem dị ka nke a nwere ike iyi ka ihe ị na-ahụ na fim. I nwere ike ịmụta Ski n'oge ọ bụla ná ndụ gị na Switzerland nwere ọtụtụ ntụrụndụ na na zuru oke maka ndị mbido, na skai ihe na ewi ugwu nta. Ọtụtụ ntụrụndụ ọbụna na-enye ihe maka ụmụaka, na-eme ka Switzerland a akwa ebe maka ezinụlọ na-aga na skai njem!
Zurich na St Moritz Train tiketi
Zermatt na St Moritz Train tiketi
Lyon ruo tiketi St Moritz Train
Basel na St Moritz Train tiketi
abaitiat nwere bụghị ihe mbụ m chere na nke mgbe m na-eme atụmatụ m njem Switzerland ma. Otú ọ dị, Switzerland nwere ọtụtụ ndị mara mma na-akpali akpali ọgba ileta, karịsịa n'oge ọkụ n'oge okpomọkụ ọnwa.
Oge Zurich ruo Zermatt Train
Geneva rue oge Zụkọm Zermatt
Oge Bern ruo Zermatt
Lucerne ruo Zermatt Train times
Nke a nnukwu nnukwu onuala nwere a ọdọ na oriri ulo ime nwere ike n'ezie nabata banyere 400 ndị mmadụ na a ga-akwụ ụgwọ maka ihe dị ka na-emekpa dinners, ọzọ, na agbamakwụkwọ. Ihe e Njirimara djs, dancers, na egwú. Ị nwere ike na-a akụkọ ihe mere eme okporo ígwè site Vitznau ka a pụrụ iche na-aga. Ha website bụ naanị na German, ma i nwere ike iji Google Chrome lelee ọ bụla asụsụ mba ọzọ weebụsaịtị maka ihe njem Ama - ị nwere ike atụgharị na akpaka translation!
St. obi ụtọ Kpachara Anya
The St. Beatus ọgba bụ aka ala otu n'ime ndị kasị adọrọ mmasị ọgba systems na mba. Open si akpa izu nke March na akpa urua October, nke a bụ a zuru okè ebe maka ndị mmadụ n'otu n'otu ma ọ bụ ìgwè dị iche iche na ịga n'ebe ọdịda anyanwụ Switzerland na oge okpomọkụ niile n'afọ. Ị nwere ike inyocha ọgba naanị, ma ọ bụ iso na-na otu nke na-eduzi njegharị na-eme mgbe nile nile ụbọchị. Nkịta na-nnọọ ka sonyere gị n'ọgba nakwa, ma ị ga-mkpa ịzụta ihe ọnụ ụzọ tiketi ha! Esịne ke n'ọnụ ụzọ price (naanị maka ụmụ mmadụ, ndo) bụ mbanye na St Beatus ọgba ngosi nka, nke ga-akụziri gị ihe ndị mere, akụkọ ifo, na geology nke ọgba usoro!
Titlis glasia Cave
Nke a na otu onye bụ n'ihi na oyi na ọnwa. glasia abaitiat, makwaara dị ka ice abaitiat, na-adịkarịghị a inweta. A nleta nke a otherworldy ọgba mere si oge ochie ice bụ a ga-onye ọ bụla ski nso Engelberg. Ukwu elu gị warmest oyi uwe na traipse site ọgba-acha anụnụ anụnụ-hued corridors mere kpamkpam site ice!
Gaa Otu n'ime A Ụdị Museum
Ọ bụla isi obodo nwere a akụkọ ihe mere eme ma ọ bụ ihe ngosi nka nke sayensi bu ihe egwu imebi obodo na ụbọchị mmiri. Otú ọ dị, ụfọdụ ebe nwere n'ezie pụrụ iche ngosi ihe mgbe ochie na nanị na-ekwesịghị Agbaghara. Ndị si n'ụwa nile ileta H.R. Geiger ngosi nka na Gruyere.
H.R. Geiger bụ a ma ama Swiss artist na a maara nke ọma gburugburu ụwa maka ya macabre na futuristic sere. I nwere ike ịmata ya dị ka onye na-ese onye kere eke na nkiri Ọbịa. Ọ bụrụ na ị na-amasị iju, quirky art emikpu onwe gị na ndị Geiger Museum na-eso ya na a mmanya na Geiger themed mmanya esote ụlọ ahịa. Bụghị maara na ya art? Were a virtual njem nke ngosi nka tupu ị na-aga.
Lyon ka Geneva Train ugboro
Zurich na Geneva Train ugboro
Paris ka Geneva Train ugboro
Lucerne na Geneva Train ugboro
Ime The Home nke Fondue
Fondue bụ otu n'ime ndị kasị ama efere na-abịa nke Switzerland, na nke a bụ ihe ọ bụla mberede. Ndị a na-eri gbazee cheese si a anyị na ite ruo ọtụtụ narị afọ na n'ebe ọdịda anyanwụ na-asụ French akụkụ nke Switzerland. Otú ọ dị, ke 1930s Switzerland Cheese Union aggressively ahịa na efere a ma mba na mba, ezikwa ya na mba nri nke Switzerland ka a ụzọ na-ere na mba overabundance of cheese. Ma anyị nwere obi ụtọ na ha mere, onye na-adịghị amasị gbazee cheese na achịcha? Ụzọ gị fondue na a akọrọ mmanya ọcha, na ijide n'aka bụghị okpukpu abụọ itinye!
Basel ruo Zurich Train oge
Basel na Geneva Train n'oge
Basel ka oge train Tralaken
Basel ruo Bern Train ugboro
Echefukwala banyere ndị Chocolate
ọ bụ oge maka ezigbo Ihe mere ị ga-eji aga Switzerland – chọkọletị! Switzerland bụ nnọọ ama n'ihi na ya chocolate, na i nwere ike ịhụ ọtụtụ ndị na-ebi ndụ okomoko chocolatiers na nkuku amá n'ebe nile na mba, Otú ọ dị, Zurich bụ ma ama n'ihi na ya ọtụtụ chocolate tours. Enwere njem nlegharị na chocolate dabara mmefu ego ọ bụla! I nwere ike na-Saturday ụtụtụ eje ije tour nke na-agwakọta obodo ẹkenemede na ụfọdụ ndị kasị mma chọkọletị na obodo. I nwere ike gbalịa na-ewere a njem nke a obere chocolate factory, na ahụmahụ na-eme gị onwe gị chocolate mmanya. N'ihi na a n'ezie dara oké ọnụ n'oge okpomọkụ ọrụ, iri a chocolate tour site ụgbọ mmiri na Lindt na Sprungli factory.
Interlaken ka oge Zurich Train
Lucerne ruo Zurich Train ugboro
Bern ruo Zurich Train ugboro
Geneva ruo oge Zụich Zụich
Gaa na Top nke Europe
Ọ dị mma, ugbu a na ị jupụta na chocolate na cheese, ọ bụ oge na-akpụ akpụ ọzọ! The Swiss ugwu bụghị naanị n'ihi na oyi ski! Enwere breathtaking okpomọkụ hikes na ị nwere ike ịga na niile gburugburu mba, ma Jungfrau region kwesịrị elu gị ịwụ ndepụta. The Jungfraujoch bụ kasị elu mgbe na Europe na 3,454 mita (~ 11.330 ụkwụ) na echiche na-ekwesịghị Agbaghara. E nwere a ụgbọ okporo ígwè ga-ewe gị e n'afọ ma ọ bụrụ na ị bụghị a nnukwu onye ji, ma ọ bụ na ị gara na n'oge oyi. Ọ bụrụ na ị bụ maka a ịma aka lelee ụfọdụ n'ime ndị a ụzọ gasị na mpaghara. Ọtụtụ n'ime ụzọ gasị nwere ezi nri na onunu iche n'ụzọ, otú echegbula, ị ga-adịghị mkpa na-ike ike na ọ!
Ì nwere ebe mmasị na Switzerland? Ka anyị mara na Echefula, nke kacha mma website ka Order ụgbọ oloko tiketi bụ Save A Train
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị a n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-experiences-switzerland-winter-summer/ - (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Mụ na di m Patryk na nwa m nwanyị Mia na-aga ụwa. Ebum n’uche m bụ ịgba ndị ọzọ ume ibi ndụ ha n’ụzọ zuru ezu ma kwụsịkwa ịchụso nrọ ha! - Ị nwere ike pịa ebe a iji ịkpọtụrụ m